समाचार मैले बाँसुरी बजाएको मात्र किन आउँछ? "विद्युतीय तार भूमिगत गर्दै सरकार"
समाचार मैले बाँसुरी बजाएको मात्र किन आउँछ? “विद्युतीय तार भूमिगत गर्दै सरकार”
On: २०७६ फाल्गुन ५ गते, सोमबार, ०२:०५ बजे प्रकाशित
काठमाडौं। उपत्यकामा विद्युतीय तार भूमिगत बनाउने महत्वाकाङ्क्षी परियोजनाको आरम्भ भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार महाराजगञ्जबाट उक्त परियोजनाको कार्य आरम्भ गरेका हुन्। पहिलो चरणमा काठमाडौंको महाराजगञ्ज र रत्नपार्क क्षेत्रमा तार भूमिगत गरिने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यसलाई क्रमशः अन्यत्र पनि विस्तार गरिने सरकारको योजना रहेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको निर्देशनमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अगाडि बढाएको भूमिगत बनाउने कार्यक्रमको शिलान्याशपछि आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विकासको नयाँ अध्याय शुरु भएको धारणा राखे। प्रधानमन्त्रीले भने, “यो योजना सम्पन्न भएपछि गुजुल्टिएको तार हटेर शहर चिटिक्क बन्छ। पोलभरि गुजुल्टिएको तार देख्ने दिन अन्त्यका लागि यो काम भइरहेको छ।” विद्युत, टेलिफोनलगायत तार भूमिगत गर्ने काम काठमाडौँको महाराजगञ्जबाट शुरु भए पनि यसलाई देशका प्रमुख शहरमा विस्तार गरिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।
अन्य सम्बन्धित समाचार: टेकु अस्पतालद्वारा पीसीआर परिक्षण स्थगित
सरकारले विकास निर्माणको कामलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाएको जानकारी दिँदै उनले केही मान्छेलाई भने पीर परेको बताए। उनले भने, “सरकारले धेरै राम्रा काम गरिरहे पनि समाचार भने मैले बाँसुरी बजाएको मात्र आउने गरेको छ। सरकारले विकास र सुशासनको काम अघि बढाउँदा केही केहीलाई किन पीर परेको हो?” उनको प्रश्न थियो। विकास सबैको साझा नारा र कर्तव्य भएको स्पष्ट पार्दै त्यसलाई मजाक नठान्नसमेत उनको आग्रह थियो।
प्रधानमन्त्रीले देशभर नै तुइन विस्थापनको काम अगाडि बढेको भए पनि एकाध स्थानमा रहेको तुइन देखाएर सरकारको आलोचना गर्ने गरिएको बताए। उनले दार्चुलामा मात्र दुईवटा तुइन बाँकी रहेको भन्दै त्यसैलाई देखाएर आलोचना गर्नुको कुनै अर्थ नहुने स्पष्ट पारे।
अन्य सम्बन्धित समाचार: बहराइनको राजपरिवारको टोली सगरमाथामा
२०७६ फाल्गुन ५ गते, सोमबार, ०२:०५ बजे प्रकाशित